Etu ị ga -esi mepee ụlọ ahịa ihe na -erughị $ 50 dollar.
Etu ị ga -esi mepee ụlọ ahịa ọgwụ n'ọtụtụ steeti maka ihe na -erughị $ 50 dollar.
N'ọtụtụ steeti mepere ụlọ ahịa ọgwụ wii wii na -efu ihe karịrị otu nde dollar naanị iji mepee ụzọ n'ihi ụgwọ ikikere dị oke ọnụ, ihe nchekwa, ụgwọ ụtụ isi, ngwa ahịa ngwaahịa na ndị ọrụ. Enwere ọtụtụ akụkọ banyere ụlọ ahịa mama na pop ndị a napụrụ n'ahịa ọhụrụ a n'ihi ụlọ ọrụ nke nde kwuru nde kwadoro na -abata wee kwụọ ihe ruru $ 1 naanị Gbasara ya! Agbanyeghị ekele maka ụgwọ ugbo 2019 ị nwere ike mepee hemp nke gị Delta 8 THC site n'ụlọ gị maka erughị $ 50 dollar site na iji Mmemme Mgbakwunye Red Emperor.
Atụmatụ Business Dispensary anyị dị mfe
Delta 8 THC bụ otu n'ime narị narị ogige ndị na -esite na osisi hemp, mana n'adịghị ka CBD, CBG, na CBD, ogige a na -enye gị oke yiri Delta 9 THC nke sitere na osisi cannabis nke edepụtara ngwaahịa oge 1 site gọọmentị etiti. N'ihi ụgwọ ugbo, enyere gị ikike ire ere Delta 8 THC Ngwaahịa dịka enyere gị ohere ire ngwaahịa CBD, belụsọ na steeti gị emeela Delta 8 THC iwu akwadoghị nke ụfọdụ nwere. Agbanyeghị, dị ka onye na -ere ahịa mmekọ, ị ka nwere ike ree ndị enyi na ezinụlọ na steeti iwu kwadoro, ma ị bi na steeti amachibidoro iwu ma ọ bụ na ịnweghị. Ị nwere ike ịmalite site na ngwaahịa ole na ole wee resị ndị enyi gị wee si ebe ahụ too!
Nkeji 1 Ntanetị Ntanetị naanị atụmatụ mbido efu $ 49.00
Maka naanị dollar 49.00 ị nwere ike bido nweta ego na mgbasa ozi mmekọrịta na ịntanetị site n'ịgwa ndị enyi gị na ndị na -eso ụzọ gị ngwaahịa CBD na Delta 8 THC Ị na -enweta njikọ mmekọ nke webụsaịtị anyị na -enyocha na mgbe ọ bụla ịzụrụ ị na -enweta %10 pasent nke ngụkọta ahịa ahịa. I nwekwara ike were ndị enyi ndị ọzọ, ndị ezinaụlọ na ndị na -eso ụzọ isonye na mmemme mmekọ anyị wee nata kọmenti 10 % n'ihe niile ha na -erekwa.
Nkeji nke 2 Atụmatụ nkesa azụmahịa nke ụlọ dabere
Nke a gụnyere ihe niile dị n'elu, gbakwunyere
1 Delta 8 THC Ntanye katrij 15 49.99
1 1000 MG CBD Tincture Kalama ọnụ ahịa m 49.99
1 Ngwọta nkịta CBD 29.99
1 CBD ude na-emegide ịka nká 59.99
1 CBD Mgbu Mgbu Mgbu Mgbu Mgbu 39.99
1 CBD Mgbu Mgbu 24.99
Ọnụ Uru $ 344.92
Atụmatụ a bụ maka ndị chọrọ ị nweta ego karịa ịre ndị enyi ha na ndị ezinụlọ ha ozugbo. Mmadụ ole ka ị maara bụ ndị na -amasị cannabis ma ghọta uru CBD bara?
Ị ga -enwetakwa ndepụta ndepụta ahịa anyị na -ere ahịa ebe ị ga -eme kọmiti 10 % na ire ọ bụla ị na -ere ebe ọ bụla site na pasent 20 ruo 50 n'otu ọrịre ozugbo. Na mgbakwunye na ahịa ịntanetị ọ bụla, ị na -eme n'onwe gị ma ọ bụ ndị mmekọ gị.
Ego ole ka ị ga -enweta site na iji Mmemme Mgbakwunye Dispensary anyị?
Ọnụọgụ ndị mmekọ Ahịa Kwa ọnwa Ọnụ Ahịa Nweta ụgwọ ọrụ kwa ọnwa
Ndị ahụ nwere ike ịdị ka ihe mgbaru ọsọ dị elu mana cheta nkezi ụlọ ahịa wii wii na-eme ihe ntụrụndụ na-enwe nkezi nde 1 kwa ọnwa n'ịre ahịa. Lee https://www.502data.com/
Washington State Top Disreational Marijuana Dispensary Site na ire ahịa kwa ọnwa
Nkeji 3 weebụsaịtị webụsaịtị ika gị na ụlọ ahịa anụ ahụ anụ ahụ
Iwu Marijuana Federal dị nso n'akụkụ, ma ugbu a bụ 1 gị n'ime otu narị afọ iji malite akara nke gị wee banye t bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ na-atọ ụtọ, yana nnukwu uru. Ebe Canada nyere iwu nke ọma yana Mexico nyere iwu wii wii n'oge na -adịbeghị anya na ọkwa gọọmentị etiti bụ naanị oge tupu United States emee otu ihe ahụ. N'etiti, anyị nọ na Delta 100 THC & CBD. Ebe ọ bụ na ọtụtụ steeti akwadoghị wii wii maka ntụrụndụ dị ka Texas, Florida, North Carolina, Alabama enweghị ikike ịzụta wii wii mgbe niile yana ha nwere ike tinye onwe ha n'ụlọ mkpọrọ, ntaramahụhụ, na ọnwụ ụmụ ha. Ọ bụghị na Delta 8 THC, ọ bụrụ na ha etinyeghị mmachibido iwu, iwu kwadoro pasent 8 ire ere, wee rie dị ka CBD ma ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru 100 pasent Delta 0.3 THC. Nke a pụtara na ị nwere ike mepee ụlọ ahịa anụ ahụ na Texas wee malite ire ngwaahịa CBD THC 9 & 8 taa. Ọtụtụ puku ndị ọchụnta ego na -eme otu ihe ahụ gburugburu obodo ugbu a. Hụ: https://journalstar.com/news/local/crime-and-courts/theyre-not-doing-anything-illegal-lincoln-police-not-concerned-with-delta-8/article_3086ad5e-dc10-59cd-88cc-0f72cc67018b.html
CBD & Delta 8 Dispensaries na -emepe gburugburu mba ahụ. Malite ugbu a!
Mgbe ị nwere ụlọ ahịa nke gị, ị ga -enweta ọnụ ahịa oke olu anyị nke ga -enye gị oke uru dị elu, yana yana mmemme a, ị nwere ike ịmalite webụ nke gị ngwaahịa CBD na webụsaịtị nke gị ị nwere ike reere ndị mmadụ ngwaahịa. na mba niile. Enweghị ụgwọ mbido ọzọ maka atụmatụ a zụta ọtụtụ ngwaahịa ka ịchọrọ site na ibe ahịa anyị.
Nkeji 5 Ebe nrụọrụ weebụ ika gị ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ahụ
Mụtakwuo maka atụmatụ anyị
Kick malite ngwaahịa gị nke akpọrọ aha ọcha na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Mee akara gị na ụlọ ọrụ ijeri dọla na -esote.
Mee N'onwe Gị + DropShip
+ $ 220 Ụgwọ Mbido Otu Oge
White-Label Ngwaahịa gị
Anyị na -enye gị ngwa ahịa
Mmezu & Mbupu
Platform Ndepụta Order
Ụlọ ahịa CBD ozugbo
+ $ 599 Ụgwọ Mbido Otu Oge
Anyị na -ewu Ụlọ ahịa Ịntanetị gị
Platform Ahịa Mgbakwunye
+ $ 1250 Ụgwọ Mbido Otu Oge
Sistemụ Njikwa Mgbakwunye
Platọ ọnụahịa ọnụahịa
Arụ ọrụ ụgbọ mmiri
Agbanye Cart Automation
Wijetị Nkata Live
Ọnụ ala nke ngwongwo
*Oke oke uru
Ego ole ka m ga -enweta na ire ọ bụla?
Ị ga -enweta oke nke uru gị na ire ọ bụla. Ọtụtụ ndị ahịa zụrụ CBD na -emefu ihe karịrị $ 120, na -enye gị ọrụ n'etiti $ 60 ruo $ 70. Agbanyeghị, ị nwere ike ịtọ ọnụ ahịa gị wee mee ọdịiche dị n'etiti ọnụ ahịa ngwongwo na ọnụ ahịa ahịa gị.
Nke a bụ mmemme MLM?
Mba, CBDStartup.io anaghị etinye aka n'ụdị ọrịre ọ bụla dị iche iche nke ịre ahịa ire ere. Anyị anaghị esonye na mmemme mbupu mmiri; kọmiti niile dabere na ire ahịa n'aka ndị ahịa gị.
M na -eme iwu?
Mba, n'ụzọ nkịtị ihe niile metụtara azụmahịa na mmezu metụtara anyị. Naanị ihe ị na -elekwasị anya bụ ịkwanye ndị ahịa n'ụlọ ahịa ịntanetị gị. Anyị na -edozi nhazi, mbupu, ụtụ isi na ịkwụ ụgwọ. Ọ gaghị adịrị gị mfe karịa.
Ogologo oge ole ka usoro a na -akwado?
Anyị na -enyocha ngwa mgbakwunye ọ bụla n'ime ụbọchị azụmaahịa 1. Hụ na ịgụnye weebụsaịtị ma ọ bụ ụzọ ahịa ịchọrọ iji na ngwa ngwa, maka nkwado ngwa ngwa. Anyị ga -ezitere gị ozi nnabata na ntuziaka ozugbo ahaziri ngwa ngwa gị wee kwado ya.
Kedu mgbe m ga -akwụ ụgwọ?
A ga -akwụ ụgwọ site na mbufe akụ ma ọ bụ lelee na akaụntụ gị enyere na azụ azụ gị, na ego US. A ga-akwụ ụgwọ ahịa emere site na 1-15th na 16. A ga-akwụ ụgwọ ahịa site na 16-31 na 1.
M na -ezitere gị ndị ọbịa?
Ee e, mmemme anyị adịghị ka mmemme mmekọ ebe ahụ. Ị ga -enweta weebụsaịtị nke gị n'ahịa. Ikpokoro anyị gụnyere ngwaahịa nke ejiri akara ọcha gị mee. Yabụ na ị ga -eji ngwaahịa CBD nke gị were zụ ahịa webụsaịtị nke gị.
Kedu otu m ga -esi na -enyocha ihe m nwetara?
Anyị na -enye ọnụ ọgụgụ ozugbo maka ire ere site na dashboard njikwa gị. Naanị banye na webụsaịtị gị wee lelee ozi ahịa na ọnụ ọgụgụ dị na dashboard gị, ị ga -enwe ike ịhụ usoro ọ bụla, onye ahịa, ọrụ enwetara na ọtụtụ ndị ọzọ…
Ị nwere amụma ozi email buru ibu?
A na -eziga email nke ụdị ọ bụla nye ndị na -arịọbeghị ozi ịntanetị dị ka SPAM. Anyị anaghị ekwe ka ụdị email ọ bụla ma ọ bụ otu akụkọ na -eme spam. Anyị na-agụnye ndepụta nzipu ozi na-apụtabeghị na nkọwa anyị nke spamming email buru ibu. Ọ bụrụ na anyị achọpụta na akaụntụ mmekọ ọ bụla na -etinye aka na email ma ọ bụ ndepụta otu mgbasa ozi na -achọghị, anyị ga -emechi akaụntụ ahụ wee mebie ego ọrụ kọmiti na -echere. Anyị na -agba ndị mmekọ anyị ume ka ha jiri ụdị mgbasa ozi ọ bụla dị n'ịntanetị nke ha chọrọ iji, ewezuga nnukwu ozi ịntanetị na spamming group.